Murusade oo ku shiray Xamar iyo DFS oo ay go’aano ka dhan ah soo saareen | Caasimada Online
Home Warar Murusade oo ku shiray Xamar iyo DFS oo ay go’aano ka dhan...
Murusade oo ku shiray Xamar iyo DFS oo ay go’aano ka dhan ah soo saareen
Muqdisho (Caasimada Online) Magaalada Muqdisho waxaa galabta kulan kale ku yeeshay Mid ka mid ah beelaha degga qaybo ka mid ah Soomaaliya.
Beesha Murusade oo dhawaan sheegtay in kal soonida kala laabatay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh ayaa markale kulan weyne kale ku yeelatay Muqdisho.
Afhayeen u hadlay beesha ayaa warbaahinta u sheegay in beesha kulankeeda maanta uu ahaa kii labad oo ay yeeshaan, kaasoo ay uga soo horjeedaan hoggaanka dowladda sida madaxweynaha.
Wuxuu sheegay kulanka maanta in looga gun lahaa siddii beelaha kale iyo beesha caalamka loogu soo bandhiggi lahaa go’aanka ay dowladda ka gaareen sidda uu hadalka u dhigay.
“Kulanka maanta wuxuu daba socdaa kulankii horre, waxaana kan aan ku soo bandhigeynay wax yaabaha nagu kali fay in dowladda aan kalsoonida kala laabanay,beelaha Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaan u sheegeynaa in madaxweynaha uu ku fashilmay wax yaabaha lagu sugaayay” ayuu yiri.
Wuxuu kaloo sheegay in beesha go’aanka ay gaartay shirkii horre aaney laga laaban, waxaana uu madaxweyne Xasan Sheekh ku eedeeyay in faquuqay beesha oo ah beel buu yiri.
“Madaxweynaha xukuumadii horre oo 1o-ka wasiir wuxuu na dhahay wasiir idiinma hayo, waan yaabnay laakin waan iska yeelnay, xukuumada hadda jirta wax wasiir ah kuma lihin iskaa daayee xil nala siiyo kuwa xilalka haya ayuu madaxweynaha ka qaadayaa xilalka ay hayaan” ayuu yiri.
Ugu dambeyn wuxuu beelaha kale ugu baaqay in kal soonida kala laabtaan dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh, maadama ayuu yiri “Xil habeen madow ah xilka loo wareejiyay halka maalin cad uu ka badbaaday in la dilo”.